[ June 19, 2021 ] Arsenal oo u aqoonsatay xiddig reer Portugal ah bedelka mustaqbalka ee Alexandre Lacazette	Wararka Ciyaaraha Maanta
[ June 19, 2021 ] Chelsea oo kula biirtay Liverpool, Arsenal tartanka Alexander Isak’	Wararka Ciyaaraha Maanta
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBarcelona oo inter milan ka heli doonto 1 Million oo ku saabsan heshiiskii Vidal.
May 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Barcelona ayaa ka heli doonta 1 milyan euro oo gunno ah oo ka imaaneysa dhanka Inter milan iyada oo qayb ka ah heshiiska uu qeyb kaga noqday kooxda Reer italy ciyaaryahanka heerka caalami ee Chile wuxuu heli doono mushaar toos ah Xiddiga reer Chile ayaa ku biiray Nerazzurri isagoo xor ah xagaagii hore.
Heshiiska ayaa qeyb ka ahaa dhowr gunno oo ku saleysan qaab ciyaareedka ciyaaryahanka iyo natiijooyinka kooxda Sida laga soo xigtay Calciomercato.com kooxda Serie A ayaa siin doonta Barcelona abaalmarin dhan 1 milyan euro ka dib markii ay ku guuleysteen horyaalkii 19aad ee taariikhdooda, waana kii ugu horreeyay muddo toban sano ah.
José Mourinho ayaa ahaa tababarihii ugu dambeeyay ee ku guuleysta horyaal xilli ciyaareedkii 2009-10 Vidal ayaa heshiis 5 milyan euro ah kaga yimid barcelona isagoo ku biiray Inter,m laakiin sida lagu sheegay warbixin hore oo La Gazzetta dello Sport daabacday mushaarka Vidal ayaa la kordhin doona waxana uu la gaarsiin doonaa 6.5 milyan euro xilli ciyaareedka 2021-22.
Sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya Italy, xiddigii hore ee kooxda Juventus iyo Bayern Munich ayaa ka mid ah ciyaartoydii ka tagi laheyd Stadio Giuseppe Meazza dhamaadka xilli ciyaareedka iyadoo Steven Zhang uu uga digay kooxda inay qarash gareeyaan.
Arsenal oo u aqoonsatay xiddig reer Portugal ah bedelka mustaqbalka ee Alexandre Lacazette